0 Wednesday October 02, 2019 - 08:43:16
War rasmi ah oo kasoo baxay dowladda Talyaaniga ayay uga hadashay weerar ciidamadeeda shalay lagula beegsaday gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.
0 Wednesday October 02, 2019 - 08:37:01
0 Tuesday October 01, 2019 - 08:43:16
Wararka ka imaanaya wadanka Kenya ayaa sheegaya in ciidamada Booliska ee qaabilsan ladagaallanka waxa loogu yeero Argagaxisada ay toogasho ku dileen dad muslimiin ah.
0 Monday September 30, 2019 - 13:36:37
War Cusub oo ka soo baxay Xarakada Al-Shabaab ayaa lagu sheegay in weli ciidankoodu ka dagaalamayaan gudaha xerada Balidogle, islamarkaana ay qabsadeen aagag dhowr ah oo katirsan saldhigga.
0 Monday September 30, 2019 - 12:22:55
0 Monday September 30, 2019 - 12:12:01
0 Monday September 30, 2019 - 11:29:47
0 Sunday September 29, 2019 - 09:13:04
0 Sunday September 29, 2019 - 09:06:56
0 Sunday September 29, 2019 - 09:01:38
Wararka ka imaanaya gobolka Sh/Hoose ayaa sheegaya in markale weeraro xooggan ay lakulmeen saldhigyada ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda ay ku suganyihiin deegaan katirsan gobolkaasi.
0 Friday September 27, 2019 - 09:06:59
Alle ha unaxariistee waxaa magaalada Jilib ee Jubbada dhexe ku geeriyooday Ibraahim Aadan Ibraahim (Ibraahim Fareey) oo ahaa Suldaankii Beesha Tuni.
0 Thursday September 26, 2019 - 10:34:31
0 Thursday September 26, 2019 - 10:23:02
0 Thursday September 26, 2019 - 09:33:37
0 Wednesday September 25, 2019 - 08:55:44
0 Wednesday September 25, 2019 - 08:51:28
Sida ay wararku sheegayaan weerar dhabbagal ah ayaa markale ciidamada melleteriga Kenya ku qabsaday xuduud beenaadka ay wadaagaan Soomaaliya iyo dhulka Soomaalida NFD.
0 Wednesday September 25, 2019 - 08:49:04
0 Monday September 23, 2019 - 08:27:21
Duqeyntii ay dhowaan Maleeshiyaadka Xuuthiyiinta ugeysteen Keydadka shidaalka dowladda Sacuudiga ayaa saameyn xun ku reebtay qiimaha shidaalka caalami ahaan.
0 Saturday September 21, 2019 - 07:31:58